Bangladesh: Faha-40 Taonan’ilay Fampisehoana Ho An’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2011 11:23 GMT
Hatramin'izay nikarakaràn'i Bob Geldof sy Midge Ure fiakarana an-tsehatra ho fanampiana, fampiaraham-peo hitadiavana vola hiadiana amin'ny tsy fahampian-tsakafo ao Etiopia ny13 Jolay 1985, izay nahavoriana mpijery 2 tapitrisa avy aminà firenena 150, ny fampisehoana nahomby toy izany dia lasa nalaza maneran-tany.
Fa ny votoatin'ity hetsika ity dia ny Fampisehoana ho an'i Bangladesh, ilay fampisehoana fitadiavam-bola roa nokarakarain'ireo mpanakato George Harrison sy Ravi Shankar ny 1 August 1971, zavatra izay tsy fantatry ny maro. Bilaogera avy ao Bangladesh no nankalaza ny faha 40 taonan'io seho io ary niteny tamin'izao tontolo izao hoe maninona io no misy lanjany ho an'i Bangladesh.
Naadir Junaid ao amin'ny Sachalayatan no namatsy [bn] ny fototr'ilay tantaranà seho :
Aogositra 1971 tamin'izay ; mponina maro tao Bangladesh no nandalo fotoan-tsarotra. Ny firenen-dehibe Tandrefana matanjaka dia tsy nahatsikaritra ny famoretana sy ny genocide nataon'ny tafika Pakistane tao Bangladesh (avy eo Pakistana atsinanana ). Nisafidy ny fomba ara-miaramila hampanginana ny fangatahana mari-pototry ny sivily tao Bangladesh ny miaramila Pakistane. An-tapitrisany ireo mponina tao Bangladesh no nandao ny fonenany mba hanavotra aina ary betsaka no nialokaloka tany amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana tany Inde mpifanolo-bodirindrina aminy. Nefa ny Amerikana ngezalahy nanohitra fahaterahan'ilay firenena vaovao antsoina hoe Bangladesh mba hitazonana fotsiny ny tombotsoa politikany ao amin'ilay faritra. Ny Praiministra Indiana Indira Gandhi dia notezeran'ny Biraom-pitantanan'i Nixon noho izy nandray ireo mpialokaloka avy ao Bangladesh ary nanampy ireo mpitolona ho amin'ny fahafahana.
Valobashar Deyal (Wall Of Love) na ( Rindrim-pitiavana) [bn] dia nanandratra fankasitrahana ho an'ireo mpanakanto ireo :….
Ary endri-pahanginana mangatsiaka be sy ondana mihoson-drà (Joan Baez)
Ny Tahirim-bola George Harrison ho an'ny UNICEF, ho fankalazana ny faha 40 taonan'ilay fampisehoana ho an'i Bangladesh, dia mandefa manontolo ny lahatsarin'ilay fampisehoana ATO hatramin'ny 1 August 2011 11:59 hariva EDT.
Omi Rahman Pial ao amin'ny Somewhereinblog dia nampahatsiahy [bn] ny rehetra fampisehoana iray hafa ho an'i Bangladesh adino, izay natao tao Kennington Oval any London ny 18 Septambra 1971. Ireo dokambarotra ho an'ilay fampisehoana nantsoina hoe “Veloma ry Lohataona” dia nilaza mazava tsara fa “Fampisehoana gadona Rock ilay izy Ho Fanampiana Ireo Niharam-boina Tao Bangladesh”. Ireo mpanakanto hita tao The Who, The Face (teo amin'ny feo: Rod Stewart), America, Mott The Hoople sns..
Mosaddik Uzzal mampahafantatra [bn] fa ny governemanta ao Bangladesh dia hanome fankasitrahana isan-karazany ho an'ireo firenena namana nanampy an'i Bangladesh sy ho an'ireo mponina ao Bangladesh nandritra ny adim-panafahana 1971. Ilay lisitra dia ahitàna ny mpanakanto George Harrison, Bob Dylan, Joan Baez ary Pandit Ravi Shankar ankoatra ireo maro hafa.